Air System Trasport And Connections - ETCN Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Kukosha Added Assembly Service
With refu mashoko yokushanda ruzivo pamwe mhepo compressed uye Urume chokufambisa kudare, tinobatsira kuti mhiri kwemakungwa mutengi kuwana chakavimbika kupfuura uye refu upenyu Stainless simbi kana chiwanikwa mutopota maererano kwokubatana kutsanya isu rinonzi "Super Mapaipi hurongwa".
Tiine zvikuru yakatanga maindasitiri zvakatipoteredza, zvetsika maindasitiri Mapaipi hwakundikana kusangana yepamusoro zvinodiwa kuti compressed gasi vatengi '. The Super Mapaipi kuti yakabuda sezvo nguva zvinoda anogona kubatsira vatengi kugadzirisa zvinetso zvavo zvokunyama selection, kugadzira uye kugadzwa.
mhando iyi mutopota mutsetse dzinowanzotsigi- vakaforera Transportation pamusoro Air, Inert Gas, Water nevamwe Material. The anobatsirwei kuunza zvakasimba kubatana, kuchenesa uye simba zveruponiso kuvandudza kunyatsoshanda uye kukosha munyika nyere mutsetse hurongwa.
Tinosungirwa yokuderedza zvisingakoshi simba zvinodyiwa uye kutambisa chirongwa gasi Kupfuudzwa, chekunatsiridza gasi, kuona ngozi, yakatsiga uye yepamusoro yakachena mhepo hurukuro kune chirwere zvokushandisa. mhando iyi mutopota mitsetse vari nyore yakarongeka, nyore kuisa, simba okuponesa, dziviriro kwezvakatipoteredza, kuchengeteka uye kuvimbika muna Centralization, kunaka zvigadzirwa wakachengetwa refu pamwero. Chinoumba nokurondedzerwa vari nzwisisika uye anogona kusangana zvinodiwa nevatengi yakasiyana siyana minda - zvemagetsi midziyo, chikafu uye chinwiwa, maindasitiri kugadzira, itsva simba, kudhinda uye papermaking, zvipfeko uye Whitehead Textile, zvokurapa midziyo, uto michina.
Andvantages ose Super mutopota mutsetse hurongwa
Pakazowedzerwa ongororo yenyika
Safe uye yakavimbika
0 leakage nokuva chisimbiso
Fast kuisa Modularization pasina nomoto, ndichisunga nekukumikidza clamping
Easy kushanda pasina nokudzidziswa rinorema
Nyore kucheka uye chiedza pamwe zvivanakire pamusoro-nzvimbo chokugadza
Usazviomesera kubatana uye repeatable Connect / patsanura
Nyore kuwedzera shunt mutsetse
Super yakanaka zvemukati uye zvekunze pamusoro
Makore 20 upenyu mutoro
Smooth womukati pamusoro hwakaderera kukweshera coefficient
Optimized patani hwakaderera nevezera donhwe pakuguma mutopota mutsetse
Welding Repair Services, Nemazvo cnc machine Parts, Sheet Metal Fabrication, Metal tsikwa, zvakarurama Kukanda,